Deezer inosanganisirwa muPambaPod | IPhone nhau
Wese munhu anoziva kuti kana iwe uchida kutaurira Siri kuti aridze mimhanzi kuburikidza nePambaPod, iwe unofanirwa kunyorera Apple Music. Imwe nguva yapfuura, iwe unogona zvakare kuzviita kana iwe uri Pandora mutengi. Iye zvino Apple inotendeuka pombi yeDeezer futi. Spotify, ichiri kurambidzwa.
Izvi zvinoreva kuti kana iwe uri kunyorera kune inoyerera mimhanzi chikuva Deezer, unogona kuiridza pane yako HomePod zvakananga naSiri. Nemhando dzese dzemhando yepamusoro idzo papuratifomu iyi inotipa.
Iye zvino, tinogona kuteerera kumimhanzi nekutenderera nayo CD mhando inopihwa neDeezer mimhanzi papuratifomu, pane yedu HomePod, usina kutanga waenda kuburikidza neiyo iPhone application.
Izvi zvinoreva kuti kana iwe wakanyoreswa kuDeezer, iwe unogona ikozvino kuwirirana zvakananga neako HomePod uye uti "Hei Siri, ridza Deezer mimhanzi" kana "Hei Siri, ridza (rwiyo rwakadai)" uye icharidzwa kubva pachikuva.
Deezer achangobva kuzivisa nhasi kuti ichave iri kusangana neImbaPod. Izvi zvinoreva kuti vashandisi vanozokwanisa kumisikidza Deezer sevhisi yavo yemimhanzi. kufanosarudzwa pane iyo HomePod uye iyo nyowani HomePod mini.
Kana yagadziriswa, unogona kubvunza HomePod kuburikidza Siri tamba nziyo, albham, uye runyorwa. Panzvimbo pekushandisa Apple Music, iyo unit ichaerera yakananga kubva kuDeezer chikuva.
Deezer anoti iyo HomePod inogona kutenderera yemhando yepamusoro isina kurasika mimhanzi kana iwe uri mutsigiri Deezer HiFi. Nekudaro, iko kubatanidzwa hakuwedzeri kune maDezez podcast kana kurarama zvirimo odhiyo; chete kumumhanzi mune yako catalog.
Kuti uwane sevhisi nyowani, dhawunorodha vhezheni yazvino yeapp yeDeezer pane yako iPhone uye ita shuwa kuti yakagadziridzwa kuIOS 14.3 kana gare gare. Deezer ane vangangoita mamirioni gumi nematanhatu evashandisi vane raibhurari yekushambadzira yenziyo mamirioni makumi manomwe nematatu. Nhau huru, pasina kupokana. Will Apple achaita zvakafanana ne Spotify? Ngatitarisirei kudaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Deezer inosanganisirwa muPambaPod
Iwe unofanirwa kutarisa kunyorwa kwechinyorwa, chakanyorwa zvakashata zvekuti hachinzwisisike ...
Washington Post: AirTag Anti-Yekutevera Matanho Haina Kukwana